HomeWararka WargeysyadaWararka Suuqa kala iibsiga: Kuwa laga Qoray Ronaldo, Keita, Bielsa, Bertrand, Llorente, Andersen, De Paul, Ings, Patricio
May 14, 2021 Wararka Wargeysyada, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone ayaa loo maleynayaa inuu taageere weyn u yahay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Naby Keita, oo 26 jir ah, waxaana uu doonayaa inuu ku daro xiddiga reer Guinea xagaagan. (DailyStar)
Tababaraha Leeds United Marcelo Bielsa, oo qandaraaskiisa haatan ee kooxda uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan, ayaa qarka u saaran inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda ka dhisan Elland Road. (Telegraph)
Leicester City ayaa xiiseyneysa saxiixa daafaca bidix ee reer England iyo kooxda Southampton Ryan Bertrand. 31 jirkaan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan ka dib toddobo sano oo uu la joogay kooxda Saints. (Leicester Mercury)
Manchester United ayaa la fahamsan yahay inay isku diyaarineyso dalab 68 milyan oo ginni ah oo ay ku dooneyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Atletico Madrid iyo xulka Spain Marcos Llorente, iyadoo kooxda ka ciyaarta La Liga ay dooneyso inay soo dadajiso 26 jirkaan wadahadalada qandaraaska si uu ugu sii hayo kooxda. (Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka Italy Jorginho ayaa hoos u dhigay wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya inuu ka tagayo Chelsea, iyadoo 29 jirkaan uu sheegay inuu ku dareemayo “gurigiisa” kooxda ka dhisan Stamford Bridge. (Independent)
Goolhayaha reer Talyaani Gianluigi Buffon, oo 43 jir ah, ayaa sheegay inuu “helay dalabyo” uu kusii wadan karo ciyaarista markii uu ka tagayo Juventus dhamaadka xiliciyaareed kaan, wuxuuna “qaadan doonaa 20 ilaa 25 maalmood si aan go’aan uga gaaro” inuu ciyaarayo ama ka fariisanayo. (Goal)
Benjamin Mendy, oo 26 jir ah, ayaa ku soo laaban kara Chelsea? Magaca daafaca bidix ee kooxda Manchester City ee reer France ayaa ka soo muuqday liiska xulashooyinka Chelsea ee taageerayaasha doonaya magaca ciyaaryahanka (Manchester Evening News)
daafaca dhexe ee France Dayot Upamecano, 22 sano jir ah, oo ku biiri doona Kooxda Bundesliga Bayern Munich aduun dhan £ 38milyan xagaagan, ayaa sheegay inuu iska diiday fursad uu u saxiixo Manchester United . (Athletic)
Tottenham ayaa lagu soo waramayaa inay rajeyneyso inay ku qanciso 24 jirka daafaca dhexe ee reer Denmark Joachim Andersen, kaasoo xilli ciyaareed amaah ah kula qaatay Fulham kooxda Faransiiska ee Lyon, si uu ugu biiro kooxda ka dhisan waqooyiga London ee Arsenal . (Teamtalk)
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Barcelona Xavi ayaa saxiixay qandaraas cusub oo uu ku sii wadi doono maareynta kooxda fadhigeedu yahay Qatar ee Al-Sadd ilaa 2023, isagoo dhabar jab ku ah madaxweynaha Barca Joan Laporta, kaasoo raadinaya inuu bedelo tababaraha haatan ee Ronald Koeman oo u dhashay Spain xilli ciyaareedka soo socda. (Dailymail)
Khabiirka ciyaaraha ee Ian Wright ma rumeysna in Arsenal ay tahay inay 24-jir qadka dhexe Dani Ceballos amaah ugala soo wareegto Real Madrid . (Metro)
Hooyada Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, waxay jeclaan laheyd wiilkeeda caanka ah inuu ku laabto Sporting Lisbon, waa hadii 36 jirkaan weerarka ka ciyaara uu ka tago Juventus xagaaga. (Theguardian)
Weeraryahanka reer Argentina Lautaro Martinez, oo 23 jir ah, ma uusan saxiixin qandaraas cusub kooxda Inter Milan isagoo sugaya inuu arko waxa ay qorsheynayaan kooxda mustaqbalka, sida uu yiri wakiilkiisa. (Gazzetta dello Sport)